प्रधानमन्त्रीले बोले झूट ! – Dullu Khabar
प्रधानमन्त्रीले बोले झूट !
१७ पुष २०७७, शुक्रबार १३:३७
काठमाडौं । संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणासँगै फुटेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दुवै समूहले आफू आधिकारिक भएको दाबी गरेका छन् ।
आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आयोगमा गएको प्रचण्ड–माधव समूहका नेता लीलामणि पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् । उनले अघि भने, ‘निर्वाचन आयोगलाई मनोबैज्ञानिक दबाव दिन उहाँहरुले यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ।’यो समाचार अनलाईन खबरमा छ ।